Vaovao - Karazana sy fisafidianana kojakoja valizy pneumatic
Karazana sy fisafidianana kojakoja valizy pneumatic
Amin'ny dingan'ny fampiasana valizy pneumatika, matetika dia ilaina ny manamboatra singa mpanampy sasany hanatsarana ny fahombiazan'ny valizy pneumatika, na hanatsara ny fahombiazan'ny fampiasana ny valizy pneumatika. Ny kojakoja mahazatra ho an'ny valves pneumatika dia misy: sivana rivotra, valve solenoid miverimberina, switch switch, posisialy elektrika, sns. pneumatika telo. Izy io dia ampiasaina mba hidirana amin'ny loharanon-drivotra mba hanadio sy hanivana ny fitaovana pneumatika ary hampihena ny tsindry amin'ny fitaovana hanomezana ny loharano azo avy amin'ny rivotra.
Karazana kojakoja valizy pneumatic:
Aktuatera pneumatic mihetsika roa: fanaraha-maso toerana roa ho an'ny fanokafana sy fanidiana ny valizy. (Fihetsiketsehana indroa)
Mpikatroka miverina amin'ny lohataona: misokatra na mikatona ho azy ny valizy rehefa tapaka na tsy mandeha tsara ny fizaran-tsolika. (Fihetsiketsehana tokana)
Valizy solenoid voafehy elektronika tokana: misokatra na mikatona ny valizy rehefa omena ny herinaratra, ary manidy na manokatra ny valizy rehefa very ny herinaratra (misy ny kinova porofo-mipoaka).
Valizy solenoid voafehy elektronika indroa: misokatra ny valizy rehefa mihalehibe ny coil iray, ary mikatona ny valizy rehefa manome hery ny coil iray hafa. Izy io dia manana asan'ny fahatsiarovana (misy ny ex-proof type).
Kosa famerana: famindrana lavitra ny famantarana ny toeran'ny valizy (miaraka amin'ny karazana porofo-mipoaka).
Positioner elektrika: manamboatra sy mifehy ny fikorianan'ny valizy arakaraka ny haben'ny signal ankehitriny (standard 4-20mA) (miaraka amin'ny karazana fipoahana).
Fametrahana pneumatika: ampifanaraho sy fehezo ny fikorianan'ny valizy arakaraka ny haben'ny mari-pamantarana ny tsindry amin'ny rivotra (standard 0.02-0.1MPa).
Mpanova herinaratra: Izy io dia mamadika ny famantarana ankehitriny ho lasa famantarana ny tsindry rivotra. Izy io dia ampiasaina miaraka amin'ny toeran'ny pneumatika (miaraka amin'ny karazana porofo-mipoaka).
Ny fanodinana loharanon-drivotra dia sombin-javatra telo: ao anatin'izany ny tsindry fampihenana ny rivotra, ny sivana, ny zavona, ny fanamafisana ny tsindry, ny fanadiovana ary ny fanosorana ireo faritra mihetsika.
Fomba fiasa amin'ny tanana: Ny fifehezana mandeha ho azy dia azo ampiasaina amin'ny tanana amin'ny toe-javatra tsy mahazatra.
Fisafidianana kojakoja valizy pneumatic:
Ny valizy pneumatika dia fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy. Izy io dia misy singa pneumatic isan-karazany. Ny mpampiasa dia mila manao fisafidianana antsipiriany mifanaraka amin'ny filan'ny fanaraha-maso.
1. Mpihetsika pneumatika: ① karazana fihetsika roa, type karazana fihetsika tokana, specifications famaritana modely, ④ fotoana fihetsika.
2. Valizy solenoid: valve valizy solenoid fifehezana tokana, valve valizy solenoid fanaraha-maso roa, voltage voltage miasa, karazana fipoahana
3. Fomba fanehoan-kevitra: switch switch mekanika, switch switch akaiky, current signal amin'izao fotoana izao, ④ mampiasa voltre, type type-explosion-proof
4. Positioner: ① posy elektrika, ② pneumatika,, signal ankehitriny, signal signal pressure air, pressure mpanova herinaratra, osion karazana porofo mipoaka.
5. Fizarana telo ho an'ny fitsaboana ny loharanon-drivotra: ① faneriterena faneriterena sivana, ② fitaovana zavona solika.
6. Fomba fiasa amin'ny tanana.